Katongo horey ayuu ugu guulaystay cayaaryahanka sanadka ee Afrika - BBC Somali
Katongo horey ayuu ugu guulaystay cayaaryahanka sanadka ee Afrika
23 Nofembar 2015
Image caption Katongo ayaa sanadkii 2012-ka ku guulaystay cayaaryahanka sanadka ee Afrika ee BBC
Wuxuu ka bixiyey kooxda kubada Cagta ee Zambia gabigii ay ka lulatay.
Markii Christopher Katongo loo codeeyey inuu noqdo ciyaaryahanka Kubadda ee Africa sanadka 2012-kii, taageerayaasha Zambia ayaa ugu danbeyntii u dabaal dagay markii ay arkeen mid kamid ah ciyaar yahanadooda. oo gaarey heerka u sareeya ee ciyaaraha qaaradda.
Ciyaar yahan hore, iyo madaxa haatan ee Xiriirka Kubadda Cagta ee Zambia Kalusha Bwalya, ayaa ahaa midka kaliya ee gaarey heerka sare ee ciyaaraha Africa abaal marintooda shaqsi ahaan.
Ciyaaryahankan ayaa mar noqday xidigga Xiriirka Kubadda Cagta ee Africa (Caf) ee sanadkii 1988-dii, ha yeeshee wixii xiligaa ka danbeeyey ee tobanaankii sano, ma jirin ciyaar yahan Zambian ah oo usoo dhoweeyey heerkii uu isagu gaarey.
Image caption Katongo ayaa sidoo kale u horseeday kooxdiisa Zambia inay ku guulaysato koobka Qaramada Afrika
Sidaa darteed, markii kooxda Zambia ay ku guuleysatey koobkii Qaramada Africa, captain Katongo ayaa waxaa abaal marisay BBC-da, iyadoo Chipolopolo uu u hor kacey markii ugu horeysay heerkaasi, kooxda Zambia sare u qaado koobka.
Taageerayaasha ayaa si gaar ahaaneed waxa ugu farax sanaayeen Katongo, maadaama uu hawlkarnimo kooxda ah uu muujiyey, iyadoo tani ay ka danbeysay siinteeda weyneynta dalka iyo isaga qudhiisaba tobanaan sano.
Kormeerayaal badan, oo aan aniga kamid ahay, ayaa aaminsan in abaal marinta BBC-da ay aheyd midii meel weyn u buuxisay shaqsigan ay ka goneyd hadafkiisa, taasoo ay u wehlisay ciyaaryahannimada xirfadda askarinimada.
Halkan uga codey cidda aad dooneysid in loo caleymasaaro cayaartoyga BBC-da ee Afrika ee sanadkan 2015-ka